100G CFP2 Vagadziri | China 100G CFP2 Fekitori & Vatengesi
CFP2-100GBASE-SR10 module inotsigira chinongedzo kureba kwe100m pane yakajairwa multi-mode fiber (MMF, G.652). 100 Gigabit Ethernet chiratidzo chinotakurwa pamusoro peanavelengths mana. Multiplexing uye demultiplexing yemanavelengths mana anotarisirwa mukati mechigadzirwa.
Iyo CFP2 LR4 optical transceiver inosanganisa iyo yekufambisa uye yekugamuchira nzira kune imwe module. Padivi rekufambisa, ina nzira dze serial data hova dzinotorwa, kudzoserwa, uye kupfuudzwa kune mana laser madhiraivha, ayo anodzora mana emagetsi-ekumesa modulated lasers (EMLs) ane 1296, 1300, 1305, uye 1309 nm centre wavelengths. Iwo manyowani emasaini anobva awedzeredzwa kuita imwechete-modhi faibha kuburikidza neindasitiri-yakajairwa LC chinongedzo Parutivi rwekutambira, ina nzira dze optical data hova dzinoonekwa zvine hunyanzvi neyakaunganidzwa yeinternational demultiplexer. Yese data data inowaniswa nePIN photodetector uye transimpedance gudzazwi, kudzokororwa, uye kupfuudzwa kune inoburitsa mutyairi. Iyi module inoratidzira inopisa-pluggable yemagetsi interface, yakaderera magetsi kushandiswa, uye MDIO manejimendi manejimendi.
Iyo 100G CFP2 ER4 optical transceiver inosanganisa iyo yekufambisa uye yekugamuchira nzira kune imwe module. Padivi rekufambisa, ina nzira dze serial data hova dzinotorwa, kudzoserwa, uye kupfuudzwa kune mana laser madhiraivha, ayo anodzora mana emagetsi-ekumesa modulated lasers (EMLs) ane 1296, 1300, 1305, uye 1309 nm centre wavelengths. Iwo manyoni masaini anobva awedzeredzwa kuita imwechete-modhi fiber kuburikidza neindasitiri-yakajairwa LC chinongedzo Parutivi rwekutambira, ina nzira dze optical data hova ari optically.DE-yakawanda neyakavhenganiswa Optical demultiplexer. Yese data data inowaniswa nePINmufananidzo-detector uye trans-impedance gudzazwi, re-nguva, ndokupfuudza kune mutyairi wekuburitsa. Iyi module inoratidza a hot-plugged yemagetsi inowanikwa, yakaderera simba rakawanda, uye MDIO manejimendi inoratidzira.
Huawei Olt Mutengo, Sfp C ++, Huawei Qsfp +, Optical Fiber Module, External Modulation Transmitter, Xfp Transceiver,